Qiimaha Waxqabadka Booqdaha | Martech Zone
Axad, Oktoobar 24, 2010 Isniin, Disembar 15, 2014 Douglas Karr
Wax badan ayaan ku cabirnaa Analytics, laakiin inta badan wax qiimo ah kuma saareyno mid kasta oo ka mid ah ficillada uu soo booqdehu sameynayo markay kula xiriiraan khadka tooska ah. Waxaa muhiim ah in shirkadaha ay fiiro gaar ah u yeeshaan in ka badan booqashooyinka iyo beddelaadda… waxaa jira tan isdhaxgal ah inta udhaxeysa iyo kadib intaas oo qiimo leh.
Shaxda kore waxaan ku leeyahay laba dhidib… saameyn iyo qiime. Sida martida sida, retweet, taageere iyo raac adiga ama ganacsigaaga… waxaa jira saameyn, maahan oo keliya sababta oo ah booqdaha ayaa laga yaabaa inuu ku dhow yahay inuu wax iibsado, laakiin sababtoo ah waxay si weyn u kordhiyeen ujeedkooda iyo oggolaanshahooda shabakadaha. Iyaga maya xitaa iibso, laakiin haddii ay leeyihiin saameyn badan, saameyntooda waxay ku riixi kartaa kuwa kale oo badan inay wax iibsadaan.
Tallaabooyinka kale ee ay martidaadu qaadaan ayaa sidoo kale qiimo leh… iska diiwaangelinta emaylka ama RSS, webinar, oo wacaya waaxdaada iibka… kuwani waa ficillada oo dhami inay rajada u sii dhawaanayaan inay noqdaan macaamiil. Ganacsiyada leh barnaamijyo otomaatig ah oo dib-u-cusbooneysiiya dukaamada ka tagaya gawaaridooda wax iibsiga waxay fahmayaan sida qiimaha leh qaybtaasi. Maaddaama ay aad ugu dhowaayeen wax iibsashada, waxay u baahan karaan si fudud riixitaan yar ama xusuusin… ama xitaa waqti ay ku keydsadaan lacagaha lagama maarmaanka u ah iibsiga.
Kadib iibsiga ama cusboonaysiinta dhabta ah, waxaa jira ficillo kale oo kordhiya saamaynta iibka - qiimeynta iyo oggolaanshaha alaabooyinka la iibsaday. Qiimeyntu saameyn xoog leh ayey ku leedahay haddii rajadu ay wax iibsaneyso iyo in kale. Ansixin shaqsiyeed ama dib u eegis sheyga ayaa culeyskeedu ka sii culus yahay.
Markaad qorsheyneyso istiraatiijiyadda suuqgeynta internetka, hubi inaad raad-raacdo tallaabo kasta oo booqde uu qaadi karo. Bixi is-dhexgal iyo ololeyaal dib-u-eegid si looga wareejiyo hal ficil oo loo qaado mid kale si hufan. Waa wax walba oo badanaa in rajadu ka baxdo goobtaada oo aad lumiso iibka maxaa yeelay ma caddayn sida ay uga dhaqaaqeen hal ficil oo ay ugu sii socdaan boggaaga. U diyaari waddo cad martidaada inay kula macaamilaan. Bixi wadooyin badan natiijooyinka xitaa ka sii fiican.
Tags: qiimahawaxqabadka booqdahadhaqanka martidaqiimaha booqdaha
Ammaan Ka Fiican Tan!